अक्टूबर 2017 - सत्य वेद पुुस्तकहरू
Month: अक्टूबर 2017
कुरुक्षेत्र युद्धमा जस्तै: ‘अभिषिक्त’ शासकको भविष्यवाणी गरिएको छ
भगवद् गीता महाभारत महाकाव्यको ज्ञानको केन्द्र हो। गीता (गीत) को रूपमा लेखिएको भए पनि आज यो सामान्यतया पढिन्छ। कुरुक्षेत्रमा भएको महान् युद्धको ठीक अगाडि भगवान कृष्ण र शाही योद्धा अर्जुनको बिचको वार्तालाप गीताले वर्णन गरेको छ – शाही परिवारको दुई पक्ष बिचको युद्ध । यो आउँदै गरेको युद्धमा एक अर्काको विरोध गर्दै यो लडाकु र पुराना शाही वंशको संस्थापक, राजा कुरुको वंशका दुई शाखाका शासकहरू थिए । पांडव र कौरव चचेरे भाईहरूले वंशको कुन पक्षले शासन गर्ने अधिकार पाउने भन्ने बारेमा युद्ध गर्न लागेका थिए – पाण्डव राजा युधिष्ठिर वा कौरव राजा दुर्योधन। दुर्योधनले युधिष्ठिरको सिंहासन कब्जा गरेका थिए त्यसैले युधिष्ठिर र उनका पाण्डव सहयोगीहरू यसलाई फिर्ता लिन युद्धमा लागिरहेका थिए । पाण्डव योद्धा अर्जुन र भगवान कृष्ण बीचको भगवद् गीता वार्तालापमा आत्मिक स्वतन्त्रता र आशिष्‌ पाउने कठिन परिस्थितिहरूमा साँचो बुद्धिमा केन्द्रित छ ।
भजनसंग्रह बाइबलको हिब्रू वेद पुष्थकन महाकाव्यको बौद्धिक साहित्यको केन्द्रबिन्दु हो । यद्यपि गीतहरू (गीताहरू) को रूपमा लेखिएको भए पनि तिनीहरू प्रायः पढिन्छ । भजन दुईले दुई विपक्षी सेनाहरू बीचको महान् युद्धको ठीक अगाडि उच्च परमप्रभु र उनका अभिषिक्त (= शासक) बीचको वार्तालापलाई वर्णन गर्दछ । यस आउँदै गरेको युद्धको दुबै तिर ठूला योद्धाहरू र शासकहरू छन् । एकातिर एक राजा जो पुरानो शाही वंशको संस्थापक पुर्खा राजा दाऊदको वंशज हो । कुन पक्षले शासन गर्ने अधिकार राख्ने भन्ने बारे दुबै पक्ष युद्ध गर्न गइरहेका थिए । भजनसंग्रह २ र यहोवा र उनका शासकहरू बीचको कुराकानीले स्वतन्त्रता, बुद्धि र आशिष्‌को कुरालाई औंल्याउँछ ।
समान तपाईलाई लाग्दैन ?
भगवद् गीता संस्कृत वेदको ज्ञान बुझ्न बुझ्नको लागि फाटक हो, त्यसैले भजनहरू हिब्रू वेद (बाइबल) को ज्ञान बुझ्नको लागि फाटक हो । त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न हामीलाई भजनसंग्रहको थोरै पृष्ठभूमि जानकारी र यसको मुख्य रचनाकार राजा दाउद चाहिन्छ ।
राजा दाऊद को थिए र भजनसंग्रह के हुन् ?
राजा दाउद, भजनसंग्रह र अन्य हिब्रू ऋषिहरु र ऐतिहासिक समयसिमाका लेखन
तपाईं इजरायलीहरूको इतिहासबाट लिइएको समयसिमाबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ कि दाउद लगभग १००० ईसापूर्वमा बाँचिरहेका थिए, ती हजारौं वर्ष पछि श्री अब्राहाम पछि र श्री मोशा भन्दा ५०० वर्ष पछि । दाउदले गोठालोको रूपमा आफ्नो परिवारको भेडा चराउन शुरू गरे । गोल्यत नाम गरेको एक जना ठूलो शत्रु र एक योद्धाले इस्राएलीहरूलाई जित्ने सेनाको नेतृत्व गर्यो र इस्राएलीहरू निरुत्साहित भए र तिनीहरू पराजित भए । दाऊदले गोल्यतलाई चुनौती दिए र उसलाई युद्धमा मारे । एक जवान गोठालो केटाको महान् योद्धामा भएको यो उल्लेखनीय जीतले दाऊदलाई प्रसिद्ध बनायो ।
यद्यपि, उनी लामो र गाह्रो अनुभवहरू पछि मात्र राजा बने किनकि उनका धेरै शत्रुहरू थिए, ती दुवै विदेशमा र इस्राएलीहरूको बिचमा पनि , जो उनीहरूको बिरूद्धमा आएका थिए । अन्ततः दाऊदले आफ्ना सबै शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गरे किनकि उनी परमेश्वरमा भरोसा राख्थे र परमेश्वरले उनलाई सहायता गर्नुभयो । बाइबलको हिब्रू वेदका केही पुस्तकहरू यी संघर्षहरू र दाऊदको विजयहरूको बयान गर्दछन् ।
दाउद पनि एक संगीतकारको रूपमा प्रसिद्ध थिए जसले परमेश्वरलाई सुन्दर गीतहरू र कविताहरू रचना गरे । यी गीतहरू र कविताहरू ईश्वरबाट प्रेरणा पाएका थिए र भजनसंग्रहको पुस्तक वेद पुष्थकनमा लेखेका थिए ।
भजनसंग्रहमा “ख्रीष्ट” को भविष्यवाणीहरू
एक महान राजा र योद्धा भए पनि, दाऊदले शाही वंशबाट आउँदै गरेको ‘ख्रीष्ट’ को बारेमा भजनमा लेखेका थिए जसले उनलाई शक्ति र अधिकारमा ग्रहण गर्थे । यहाँ ख्रीष्टलाई कसरी हिब्रू वेद (बाइबल) को भजनसंग्रह २ मा प्रस्तुत गरिएको छ, भगवद् गीता जस्तो शाही लडाई दृश्य प्रस्तुत गर्दै ।
1जाति-जातिहरू किन षड्‌यन्‍त्र रच्‍छन्‌,
र मानिसहरू किन व्‍यर्थका जाल रच्‍छन्‌?
2परमप्रभु र उहाँका ‘अभिषिक्त’ जनको विरुद्धमा पृथ्‍वीका राजाहरू खड़ा हुन्‍छन्‌,
र शासकहरू आपसमा सल्‍लाह गर्छन्‌।
3तिनीहरू भन्‍छन्‌, “हामी उनीहरूका साङ्‌लाहरू छिनालौं,”
“र उनीहरूका बन्‍धनहरू फुकाऔं।”
4स्‍वर्गमा विराजमान हुनुहुनेचाहिँ हाँस्‍नुहुन्‍छ, परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्‍छ।
5तब आफ्‍नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्‍काउनुहुनेछ,
र आफ्‍नो बल्‍दो कोपमा तिनीहरूलाई यसो भन्‍दै त्रस्‍त पार्नुहुनेछ:
6“मैले आफ्‍नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्‍नो ‘राजालाई’ नियुक्त गरेको छु।”
7परमप्रभुको यो आदेश म घोषणा गर्नेछु, उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, ‘तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्‍माएको छु।’
8मसँग माग, र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुल्‍याइदिनेछु,
र समस्‍त पृथ्‍वी तिम्रो निजी सम्‍पत्ति तुल्‍याइदिनेछु।
9फलामको राजदण्‍डले तिमीले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछौ,
र कुमालेको भाँड़ालाई झैँ तिमीले तिनीहरूलाई चकनाचूर पार्नेछौ।
10यसकारण हे राजा हो, बुद्धिमान्‌ होओ, पृथ्‍वीका शासक हो, सावधान!
11भय मानेर परमप्रभुको सेवा गर,
र कम्‍पनसाथ आनन्‍द मनाओ।
12पुत्रलाई चुम्‍बन गर, नत्रता उहाँ रिसाउनुहुनेछ, र तिमीहरू बाटैमा नष्‍ट हुनेछौ, किनभने उहाँको कोप चाँड़ै दन्‍कन्‍छ। ती सबै धन्‍य हुन्‌, जो उहाँको शरण पर्दछन्‌।
यहाँ उही खण्ड हो तर ग्रीकबाट पहिले वर्णन गरिए अनुसार ।
भजन २: १-२ – मूल भाषामा हिब्रू र ग्रीक (LXX)
Hebrew Greek English नेपाली
א לָמָּה, רָגְשׁוּ גוֹיִם; וּלְאֻמִּים, יֶהְגּוּ-רִיק. ב יִתְיַצְּבוּ, מַלְכֵי-אֶרֶץ– וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ-יָחַד: עַל-יְהוָה, וְעַל-מְשִׁיחוֹ. 1Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;2παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. διάψαλμα. 1 Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?2The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his Christ. 1जाति-जातिहरू किन षड्‌यन्‍त्र रच्‍छन्‌, र मानिसहरू किन व्‍यर्थका जाल रच्‍छन्‌? 2परमप्रभु र उहाँका ‘ख्रीष्ट’ जनको विरुद्धमा पृथ्‍वीका राजाहरू खड़ा हुन्‍छन्‌, र शासकहरू आपसमा सल्‍लाह गर्छन्‌।
कुरुक्षेत्र युद्धको नतीजा
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, भजनसंग्रह २ मा ‘ख्रीष्ट’ / ‘अभिषिक्त’ को प्रसंग भगवद्गीताको कुरुक्षेत्र युद्धसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर जब हामी यति धेरै पहिले कुरुक्षेत्र युद्धको लडाईंको बारेमा सोच्दछौं भने केही मतभिन्नताहरू देखा पर्दछन् । अर्जुन र पाण्डवहरूले युद्ध जिते र यसैले त्यहाँ शक्ति र शासनको कब्जा कौरवबाट पाण्डवहरूमा भयो र युधिष्ठिरलाई हकदार राजा बनाइयो । सबै पांडव भाई र कृष्ण १८ दिनको युद्धमा बाँचे, तर केही मुठीभर मान्छेहरू मात्र बाँचे – सबै मारिए । तर युद्ध पछि ३६ बर्ष मात्र शासन गरेपछि युधिष्ठिरले यो सिंहासन त्यागेर अर्जुनका नाति परीक्षितलाई पदवी दिए । त्यसपछि उनी द्रौपदी र उनका भाइहरूसँग हिमालयको लागि प्रस्थान गरे । द्रौपदी र चार पाण्डवहरू – भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव यात्राको क्रममा मरे । युधिष्टिर आफैले स्वर्गमा प्रवेश प्रदान गरे । कौरवकी आमा गान्धारी कृष्णसँग युद्ध नरोकेको कारण क्रोधित भइन्, त्यसैले उनीले उनलाई सराप्छिन् र युद्ध सकिएको ३६ बर्ष पछि मारिए जब उनको अन्तर् – वंशको झगडाको कारण एक्कासी तीरले उनलाइ लाग्यो । कुरुक्षेत्र युद्ध र त्यसपछिको कृष्णको हत्याले संसारलाई कलियुगमा पुर्‍यायो ।
त्यसो भए कुरुक्षेत्र युद्धबाट हामीलाई के लाभ भयो ?
हाम्रो लागि कुरुक्षेत्र युद्धको लाभ
हाम्रो लागि, हजारौं बर्ष पछि जिउने, हामी आफैंलाई बढी खाँचोमा पाउदछौ । हामी संसारमा बाची रहेका छौं जहाँ निरन्तर पीडा, रोग, बुढेसकाल र मृत्युको छायाँमा बस्दछौं । हामी सरकारको अधीनमा बस्छौं जुन प्रायः भ्रष्ट हुन्छ र शासकहरू धनी र व्यक्तिगत साथीहरूलाई सहयोग गर्दछन । हामी धेरै तरिकाहरूबाट कलियुगको प्रभावहरू महसुस गर्दछौं ।
हामी भ्रष्टाचारलाई बढावा न दिने, कलियुगको अधीनमा नरहेको समाजको लागि र संसारमा कहिले नसकिने पाप र मृत्युबाट व्यक्तिगत छुटकाराको लागि उत्सुक छौं ।
हाम्रो लागि भजनसंग्रह २ को आउदै गरेको ‘ख्रिष्ट‘ को लाभ
भजनसंग्रह २ मा वर्णन गरिएको ‘ख्रिष्ट’ ले हाम्रा आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्दछ भनेर हिब्रू ऋषिहरुले वर्णन गर्दछन । यी आवश्यकताहरू पूरा गर्न युद्धको आवश्यकता पर्दछ, तर कुरुक्षेत्रभन्दा भिन्न युद्ध र भजनसंग्रह २ मा चित्रित युद्धभन्दा फरक । यो ‘ख्रीष्टले मात्र’ चलाउन सक्ने युद्ध हो । यी भविष्यवक्ताहरूले देखाउँदछ कि शक्ति र सामर्थ्यबाट सुरू हुनुको सट्टामा ख्रीष्टले हामिलाई चाहिएको पाप र मृत्युबाट छुटकारा बाट सेवा गर्न शुरू गर्नुभयो । उनीहरूले भजनसंग्रह २ को बाटो देखाउँदछन् जुन एक दिन पुग्नेछ, पहिलो अर्कालाई हराउन अर्को लडाईको लागि लामो यात्रा गर्नु आवश्यक छ, सैन्य शक्तिले नभई संसारमा बन्धक राख्नेहरूका लागि प्रेम र बलिदानको साथ । हामी यो यात्रा दाउदको शाही रूखको मृत हांगाको टुसा बाट शुरू गर्दछौं ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 20/10/2017 01/09/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स अर्जुन र कृष्ण, कुरुक्षेत्र युद्ध, गीता, भगवद् गीता, भजन
राजले जस्तै: येशू ख्रीष्टको नाममा ‘ख्रीष्ट’ को अर्थ के हो?
म धेरै जसो जब मान्छेहरूलाई सोध्छु, कि येशू अन्तिम (पछिल्लो) नाम के थियो। धेरै जसो यस्तो जवाफ दिन्छन्,
“मलाई लाग्दछ, कि उनको अन्तिम नाम ‘ख्रीष्ट’ थियो, तर म यस प्रति निश्चत छैन।”
तब मैले सोध्ने गर्दछु,
“यदि यो सत्य हो भने जब येशू एउटा केटो थिए तब के युसुफ ख्रीष्ट र मरियम ख्रीष्ट सानो येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो साथमा बाजार लिएर जाने गर्द थिए?”
यसलाई यसरी भन्दा, उनीहरुलाई थाहा भयो, कि येशूको अन्तिम नाम ‘ख्रीष्ट’ थिएन। यस प्रकार, अब ‘ख्रीष्ट’ के हो? यो कहाँ बाट आयो? यसको अर्थ के हो? धेरै जसो को लागि यो आश्चार्यको कुरा हुनसक्छ, ‘ख्रीष्ट’ एउटा यस्तो उपाधि हो, जसको अर्थ ‘शासक’ वा ‘शासन’ संग छ। यो उपाधि त्यो राजाको जस्तो होइन, जस्तो ब्रिटिश राज्य मा पाइन्दछ, जसले दक्षिण एशियामा धेरै दशक सम्म राज गरे।
भाषान्तरण बनाम लिप्यंतरण
यसलाई हर्नुको लागि, सबैभन्दा पहिले अनुवाद अर्थात् भाषान्तरणको केहि सिद्धान्तहरुलाई हेर्नु पर्छ। अनुवादक कहिले कहिँ विशेष रूपले नाम र शीर्षकको लगि, अर्थको अपेक्षा त्यस किसिमको ध्वनि शब्दहरुलाई भाषान्तरणको लागि चुनाव गर्दछन्। यसलाई लिप्यंतरण को नामले जानिन्छ। उदाहरणको लागि, कुंभ मेला हिन्दीको कुंभ मेला अंग्रेजी लिप्यंतरण हो। यद्यपि शब्द मेलाको अर्थ ‘प्रदर्शनी’ वा ‘पर्व’ संग छ, तर यसलाई धेरै जसो अंग्रेजीमा समान ध्वनि जस्तै शब्द अर्थात् कुंभ प्रदर्शनीको अपेक्षा कुंभ मेलाको रूपमा नै उपयोग गरिद्छ। किनकी बाइबलको लागि, अनुवादकहरुले यो निर्णय लिनुपर्छ, नाम र उपाधिहरु सर्वोत्तम रूपले अनुवादित भाषामा भाषान्तरण (अर्थद्वारा) वा लिप्यंतरण (ध्वनिद्वारा) कुन माध्यमले उचित अर्थ दिन्छ। यसको लागि कुनै विशेष नियम छैन।
बाइबल सबैभन्दा पहिले 250 ईशा पूर्वमा तब अनुवाद भएको थियो, जब हिब्रू पुरानो करारलाई ग्रीक भाषा – त्यस समयको अन्तराष्ट्रीय भाषामा अनुवाद गरिएको थियो। यस भाषान्तरणलाई प्राचिन संग्रह (वा LXX) को नामले चिनिन्छ, र यो धेरै नै अधिक प्रभावशाली छ। किनभने नयाँ करार ग्रीक भाषामा नै लेखिएको थियो, त्यसैले यसमा दिएको पुरानो करारको धेरै उद्धरणहरुलाई प्राचिन संग्रह बाट नै लिएको हो।
प्राचिन संग्रहमा भाषान्तरण एवम् लिप्यंतरण
तल दिएको चित्रले यस प्रक्रियालाई देखाउद छ र यसले कसरी आधुनिक-दिनको बाइबललाई प्रभावित पर्दछ
मूल भाषाहरुले आधुनिक-दिनको बाइबलमा भाषान्तरको प्रवाह
मूल हिब्रू पुरानो करार (1500 देखि – 400 ई.पू. सम्म लेखिको थियो) लाई चित्र-खण्ड # 1 मा देखाएका छ। किनकी प्राचिन संग्रह 250 ईशा पूर्वमा लेखिएको थियो त्यसैले हिब्रू –> ग्रीक भाषान्तरलाई चित्र-खण्ड #1 देखि #2 को तर्फ जादै गरेको तीरको चिन्हले देखाएको छ। नयाँ करार ग्रीकमा लेखिएको थियो ( (50–90 ईस्वी सन्), त्यसैले यसको अर्थ यो भयो #2 मा दुवै नै पुरानो र नयाँ करार सम्मेलित छ । चित्र को तल्लो आधा भाग (#3) बाइबलको एउटा आधुनिक भाषामा भाषान्तरण गरिएको छ । यहाँ सम्म पुग्नलाई पुराने करार लाई मूल हिब्रू भाषा (1 -> 3) र नयाँ करारलाई ग्रीक (2 -> 3) देखि भाषान्तरित गरिएको हो। पहिला बताए जस्तै, अनुवादकहरुले नामहरु र उपाधिहरुलाई निर्धारित गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई निलो तीरहरुको प्रतीक चिन्हहरुको साथ लिप्यंतरण र भाषान्तरणको शब्दहरुको साथ यो दर्शौदै देखिएको छ, कि अनुवादकले कुनै पनि दृष्टिकोणलाई लिन सक्छ ।
‘ख्रीष्ट’ को उत्पत्ति
अब हामी माथि दिएको प्रक्रियाको अनुसरण गर्ने छौ, तर यस समय हामी हाम्रो ध्यान लाई ‘ख्रीष्ट’ शब्द माथि केन्द्रित गर्नेछौ।
‘ख्रीष्ट’ बाइबलमा कहाँबाट आउछ?
उपाधिहामी देख्न सक्छौ, कि मूल हिब्रू पुरानो करारमा उपाधि ‘מָשִׁיחַ’ (मसीहीयाख़) दिएको छ, जिसको शाब्दिक अर्थ ‘अभिषिक्त वा प्रतिष्ठित’ व्यक्ति संग छ जस्तै एउटा राजा वा शासक इत्यादि। पुरानो करारको समयविधिमा हिब्रू राजाहरु राजा बनिनु भन्दा पहिले (अनुष्ठानिक रीतिले तेल मल्नु) अभिषिक्त गरिन्थियो, यस प्रकारले तिनीहरु अभिषिक्त वा मसीहीयाख़ हुन्थिए । तब तिनीहरु शासक बन्द थिए, तर उनिहरुको शासन परमेश्वरको स्वर्गीय शासनको अधीनतामा,उहाँको व्यव्यस्थाको अनुसार हुने गर्दथियो ।यस भावार्थमा, पुरानो करारको एउटा हिब्रू राजा दक्षिण एशियाको भूतपूर्व राज्यपालको जस्तै हुने गर्थे। राज्यपाल दक्षिण एशियाको ब्रिटिश क्षेत्रहरुको माथि शासन गर्दथे,तर तिनीहरु यस्तो ब्रिटेनको सरकारको अधीनतामा , त्यसको व्यवस्थाको पालन गर्ने गर्दथे। पुरानो करार एउटा निश्चित रूपले विशेष मसीहायाख़ को आउने भविष्यद्वाणी (‘निश्चित’ शब्दको साथ) लाई गरिएको थियो, जुन एउटा विशेष राजा होलान। जब प्राचिन संग्रह अनुवाद लाई 250 ईस्वी सन् मा भाषान्तरित गरिएको थियो, तब अनुवादकहरुले ग्रीक भाषामा समानार्थ शब्दलाई क्रिओ मा आधारित हुन्, Χριστός (क्रिस्टोस जस्तो ध्वनि) को चुनाव गरे,जसो अर्थ अनुष्ठानिक रूपले तेल मल्लु हो। यस प्रकारले हिब्रू भाषाको शब्द ‘मसीहीयाख़’ को भाषान्तरण अर्थ द्वारा (न कि ध्वनि को द्वारा लिप्यंतरण गर्दै) Χριστός (क्रिस्टोसको उच्चारण) को रूपमा ग्रीक प्राचिन संग्रहमा गरिएको थियो । नयाँ करारको लेखक निरन्तर शब्द क्रिस्टोस को उपयोग येशूको पहिचानको लागि गरिरहे, जसको भविष्यवाणी ‘मसीहीयाख़’को रूपमा गरिएको थियो ।
तर जब हामी युरोपको भाषाहरुको कुरा गर्छौँ, तब हामी यो पाउछौ, कि ग्रीक शब्द ‘क्रिस्टोस’ को सामानार्थ कुनै पनि स्पष्ट शब्द न पाएकोले यसको भाषान्तरण ‘क्राईस्ट’ अर्थात् ख्रीष्ट गरियो। ‘ख्रीष्ट’ शब्द पुरानो करारमा आधारित हिब्रू देखि ग्रीकमा भाषान्तरित हुँदै र त्यस बेला ग्रीक देखि आधुनिक भाषाहरुमा लिप्यंतरित हुँदै एउटा विशेष शब्द हो। हिब्रू पुरानो करारको भाषान्तरण सिधै धेरै आधुनिक भाषाहरुमा गरिएको छ र अनुवादकहरुले मूल हिब्रू शब्द ‘मसीहीयाख़’ को सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरुलाई लिएका छन्। केहि बाइबलीय शब्द ‘मसीहीयाख़’ को लिप्यंतरण ‘मसीह’ शब्द द्वारा रूपान्तरित गर्दै गरिएको हो, अन्य यसको अनुवाद ‘अभिषिक्त’ को अर्थ द्वारा गर्दछ, र अन्य यसका लिप्यंतरण ‘क्राईस्ट’ शब्द द्वारा रूपान्तरित गर्दै गरिएको छ। क्राईस्ट वा ख्रीस्त (मसीह) को लागि हिन्दी शब्द लाई अरबी देखि लिप्यंतरित गरिएको हो, जसको बदलामा मूल हिब्रू भाषा देखि लिप्यंतरित भएको थियो। त्यसैले ‘मसीह’ को उच्चारण मूल हिब्रू भाषासँग धेरै निकटता मा छ, जब कि अन्य शब्द क्राईस्ट को लिप्यंतरण अग्रेजी ‘क्राईस्ट’ देखि भएको हो र यसको ध्वनि ‘क्राइस्त’ जस्तो छ। क्राईस्ट (ख्रीष्ट) को लागि नेपाली शब्द को लिप्यांतरण ग्रीक क्रिस्टोस बाट भएको हो र त्यसैले यसलाई ख्रीष्ट शब्दले उच्चारित गरिद्छ।
किनकि हामी पुरानो करारमा ‘मसीह’ शब्दलाई सामान्य रूपले नहेर्ने हुँदा, यसको सम्बन्ध पुरानो करार देखि सदैव प्रगट हुदैन। तर यस अध्ययन बाट हामीले जान्दछौँ, कि बाइबल आधारित ‘ख्रीष्ट’ = ‘मसीह’ = ‘अभिषिक्त’ सबै एक हुन् र यो एउटा विशेष उप थियो।
पहिलो शताब्दीमा प्रत्याशित ख्रीष्ट
यस बोधको साथ, आउनोहोस सुसमाचारहरु बाट केहि विचारहरुलाई प्राप्त गरौँ। तल राजा हेरोद को त्यस बेलाको प्रतिक्रिया दिइएको छ, जब ज्योतिषी यहूदिहरुको राजासँग भेटघाट गर्न उनीहरु कहाँ आए, जुन कि क्रिसमिसको कथाको एउटा राम्रोसंग परिचित हिस्सा हो। ध्यान दिनुहोस्, ख्रीष्टको लागि ‘निश्चित’ वाक्यको उपयोग गरिएको छ, यद्यपि यसले विशेष रूपले येशूको बारेमा उद्धृत गरेको छैन।
जब हेरोद राजाले यो सुने, तिनी बेचैन भए, र तिनीसँग सारा यरूशलेम पनि बेचैन भयो। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरु र जनताका शास्त्रिहरुलाई भेला गरे, र ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुने हो? भनि सोधपूछ गरे। (मत्ती 2:3-4)
तपाईं यस निश्चित वाक्यमा ‘ख्रीष्ट’ को विचार देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हेरोद र उनका प्रधानहरु मध्य राम्रोसंग बुझेका थिए – यहाँ सम्म कि येशूको जन्म हुनु भन्दा पहिले- र यो यहाँ निर विशेष रूपले येशूको लागि उद्धृत नभई उपयोग भएको हो। यो देखिन्छ, कि ‘क्राईस्ट’ अर्थात् ख्रीष्ट पुरानो करारबाट आएको हो, जुन पहिलो शताब्दीमा मानिसहरुद्वारा (हेरोद र उनका प्रधाहरु जस्तै) ग्रीकको प्राचिन संग्रह मा पाएको एउटा सामान्य पठन थियो। ‘क्राईस्ट’ एउटा नाम होइन, यद्यपि एउटा उपाधि हो (र आज पनि छ), यसले एउटा शासक वा राजाको संकेत दिदछ। त्यसैले नै हेरोद ‘चिन्तामा थिए’ किनकि उनले एउटा अर्को राजा हुने संभावनालाई स्वयंको लागि खतरा महसूस गरे। हामीले यस हास्यास्पद विचारलाई इन्कार गर्न सक्छौं, कि ‘ख्रीष्ट’ ख्रीष्टीय विश्वासीहरू द्वारा आविष्कृत गरिएका थिए वा यो कुनै ठुलो व्यक्ति जस्तै 300 ईस्वी सन्मा सम्राट कन्सटेनटाईन द्वारा अविष्कृत गरिएको थियो। यो उपाधि हजारौं वर्ष पहिले देखि कुनै ख्रीष्टिय विश्वासीको आगमन वा कन्सटेनटाईन द्वारा शासन गर्न भन्दा धेरै पहिले बाट नै प्रचलनमा थिए।
ख्रीष्टको अधिकारको विरोधाभास
येशूका प्रारम्भिक अनुयायीहरूले हिब्रू वेदमा अगमवाणी भए अनुसार येशू आउँदै गरेको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए , जबकि अरूहरूले यस विश्वासको विरोध गरे ।
उत्तर प्रेम वा शक्तिमा आधारित राजको बारेमा विरोधाभासको हृदयमा जान्छ । राजसँग बेलायती मुकुटमुनि भारतमा शासन गर्ने अधिकार थियो । तर यसले भारतमा शासन गर्ने अधिकार पायो किनकि राज पहिलो पटक सैन्य शक्तिमा आयो र आफ्नो शक्तिको माध्यमबाट बाहिरी अधीनता लागू गर्‍यो । मानिसहरूले राजलाई माया गर्दैनथे र गान्धी जस्ता नेताहरू मार्फत अन्ततः राजको अन्त्य भयो ।
येशू ख्रीष्टको रूपमा अधिकार भएको भए पनि उहाँ अधीनमा बस्न माग गर्नुभएन । उहाँ प्रेम वा भक्तिमा आधारित अनन्त राज्य स्थापना गर्न आउनुभयो र यसको लागि एकातिर सत्ता र अख्तियार बिचको विरोधाभास अर्को तिर प्रेमको आवश्यकता थियो । हिब्रू ऋषिहरुले यो विरोधाभासको अन्वेषण गरी हामीलाई ‘ख्रिष्ट’को आगमन बुझ्न मद्दत पुर्‍याएका छन । हामी हिब्रू वेदहरूमा ‘ख्रीष्ट’ को पहिलो उपस्थितिबाट तिनीहरूको अन्तर्दृष्टि अनुसरण गर्दछौं, हिब्रू राजा दाउदबाट १००० ईसापूर्व तिर बाट आएका थिए ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 17/10/2017 14/09/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bible, सामान्य प्रश्नहरू (FAQs)टैग्स क्रिश्चियन अर्थ भनेको के हो, क्रिश्चियन ब्लिबल, क्रिश्चियनको अर्थ, ख्रीष्ट भनेको हो
भारतीय समुदायमा मोशा सम्बन्धी एउटा छोटा समाज निर्मित द्वारा, हजारौ वर्षदेखि यहाँ रहदै, यहूदिहरुको भारतमा एउटा लामो इतिहास छ। अन्य अल्पसँख्यक समूहहरु भिन्न (जस्तै जैन, सिक्ख र बौद्ध धर्मालाम्बिहरु), यहूदी मूल रूपले आफ्नो जन्मभूमिलाई छोड़दै भारतमा बाहिरदेखि आए थिए। 2017 को गर्मीमा भारतीय प्रधान मंत्री मोदीको इस्राएलमा गरिएको ऐतिहासिक यात्रा देखि ठीक पहिले इस्राएलको प्रधानमन्त्री उहाँले नेतन्याहूको साथ एउटा संयुक्त सह-लेखनलाई लेखे। जब उनीले निम्न कथनलाई लेखे तब उहाँले भारतदेखि यहूदिहरुको हुने देशांतर गमनलाई स्वीकार गरेका थिए:
भारतमा यहूदी समुदायको सदैव न्यनोपन र सम्मानको साथ स्वागत गरियो र यसले कहिले पनि कुनै प्रकारको पिडाको सामना गरेन्न।
वास्तवमा , यहूदीहरूले भारतको इतिहासमा गहिरो प्रभाव पारेका छन र उनीहरूले भारतीय इतिहासमा अफ्ठ्यारा रहस्यको समाधान प्रदान गरे । भारतमा लेखिए जस्तै यो कसरी प्रकट भयो त ? यस प्रश्नको उत्तरले भारतीय संस्कृतिका सबै प्राचीन कार्यहरूलाई असर गर्दछ।
भारतमा यहूदीको इतिहास
यद्यपि भिन्न, यहूदिहरुले पारम्परिक भारतीय परिभेष अपनाउने द्वारा स्वयंलाई यसमा मिश्रित गरे
यहूदी समुदाय भारतमा समय देखि रहेका छन्? द टाइम्स ऑफ इस्राएल समाचार पत्र ले अहिले हालमा एक लेखलाई प्रकाशित गरेको छ जसमा यो भनेको छ कि ’27 शताब्दी ‘पश्चात् मनेश्शे (बेनी मनेश्शे) को गोत्रको मानिस मिजोरमको भारतीय राज्यदेखि इस्राएल फेर्की रहेका छन्। यो उनीहरुलाई उनीहरुको पुर्खाहरुलाई निर मूल रूपमा 700 ईशा पूर्व मा पुग्ने पुष्टि गर्दछ। आंध्रा प्रदेशमा बस्नेहरु एप्रैमको यहूदी गोत्रको तेलुगू-भाषी उनीहरुको भाई-बहिनी (बेन एप्रैम)को पनि 1000 वर्ष देखि अधिक समय सम्म भारतमा हुने सामूहिक स्मृति पाइन्छ, जुन फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत र यसको पश्चात् चीनमा अल्मलिदै आएका थिएमा। केरलको राज्यमा, कोचीनको यहूदी यहाँ निर लगभग 2600 वर्षदेखि नै बसोबास गर्दै आएका छन्। शताब्दी बित्नु पश्चात् उनीहरुले स्वयंलाई सानो तर पुरै भारतमा विशेष समुदायहरु निर्मित गरेका थिए। तर अब उनीहरु इस्राएल फर्किनको लागि भारतलाई छोड्दै छन्।
कोचीनमा पाएको यहूदी सभाघरको एक शिलालेख। यो यहाँ निर सयौं वर्ष देखि रहेको छ।
यहूदी कसरी भारतमा बस्नलाई आए? उनीहरु यति लामो समय पश्चात् फेरी इस्राएल किन फर्किदै छन्? हामी सँग उनीहरुको इतिहासको बारेमा कुनै अरु अन्य जाति भन्दा अधिक तथ्य पाइन्छ। हामीले यी जानकारीहरुको उपयोग समय रेखामा उनीहरुको इतिहास लाई सारंशित गर्नेछौ।
अब्राहाम : यहूदी परिवारको वंश को अरम्भ हुनु
समय रेखा अब्राहाम देखि शुरु हुन्छ। उनलाई उनको वंशबाट जातिहरुको एउटा प्रतिज्ञा दिएको थियो र उनको भेट परमेश्वरलाई उनको पुत्र इसहाकको प्रतीकात्मक बलिदान को साथमा अन्त हुन्छ। यो बलिदान येशू (येशू सत्संग) को तर्फ संकेत थियो जसले त्यस स्थानलाई देखाउदै थियो जहाँ निर उहाँको बलिदान हुनेछ। इसहाकको पुत्रको नाम परमेश्वर द्वारा इस्राएल राखियो। यो समय रेखा हरियो रंगमा अगि बढ्दछ जब इस्राएलको सन्तान मिस्रमा दासत्वको बन्धनमा थिए। यो अवधि यस समयमा आरम्भ हुन्छ, जब इस्राएलको पुत्र योसेफ (वंशावली यो थियो: अब्राहाम -> इसहाक -> इस्राएल (जसलाई याकूब भनेर पनि चिनिन थियो) -> योसेफ), इस्राएलिहरुलाई मिस्रमा लगियो, जब उनीहरु पछि गएर त्यहाँ दास बने।
मिश्रको जीवनमा फिरऊनको दासको रूपमा
मोशा : परमेश्वरको अधीनतामा इस्राएल एउटा राष्ट्र बन्यो
मोशाले इस्राएलिहरुलाई निस्तार-चाडको विपत्ति को साथै मिस्र देखि बाहिर निक्लिनमा मार्गदर्शन दिए, जसले मिस्रलाई नष्ट पार्यो र इस्राएलिहरुलाई मिस्र देखि मिस्रिहरुको हाथ बाहिर निक्लिनमा सहायता प्रदान गर्यो। मोशाको मृत्यु भन्दा पहिले, मोशाले इस्राएलिहरु माथि आशीष र श्रापहरुको घोषणा गरे (जब समय रेखा हरियो रंग देखि पहेंलो रंगको तर्फ जादछ)। तब मात्र उनीहरुले आशीष पाउने छन् जब उनीहरु परमेश्वरको प्रति आज्ञाकारी हुनेछन्, तर यदि उनीहरु आज्ञाकारी नभएमा श्रापको अनुभव गर्ने छन्। यो आशीष र श्रापहरु इस्राएल पछिको इतिहाससँग पनि बाधिएको थियो।
हजारौँ वर्ष सम्म इस्राएली आफ्नो जन्म भूमिमा रहे तर उनीहरुसँग उनीहरुको आफ्नो कुनै राजा थिएन, न त यरूशलेमको कुनै राजधानी थियो- यो त्यस समयमा अन्य मानिसहरुसँग थियो। तथापि, यसमा 1000 ईशा पूर्व राजा दाऊद आए पश्चात् परिवर्तन भयो।
यरूशलेमबाट दाऊदलाई शासन गर्ने राजाहरूको साथ रहनुहोस्
दाऊदले यरूशलेममा एउटा शाही राजवंशको स्थापना गरे
दाऊदले यरूशलेमलाई जिते र यसलाई आफ्नो राजधानी बनाए। उनले ‘ख्रीष्ट’ को आगमनको प्रतिज्ञालाई प्राप्त गरे र त्यस समय देखि यहूदीहरुले ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गरे। उनको पुत्र सोलोमन, बिना कुनै सन्तुष्टिको धनी र प्रसिद्ध, उनको उत्तराधिकारी भए र सोलोमनले यहूदिहरुको पहिलो मन्दिर यरूशलेममा मोरीयाह पहाड़ माथि निर्मित गरे। राजा दाऊदको वंशज् निरन्तर लगभग 400 वर्ष सम्म राज्य गरि रहे र यस अवधिलाई हल्का-निलो रंग (1000 – 600 ईशा पूर्व) ले दर्शाएको छ। यो अवधि इस्राएलको उन्नति समय थियो- उनीहरुसँग प्रतिज्ञा गरिएको आशीषहरु थिए। उनीहरु एउटा शाक्तिशाली जाति थिए; उनीहरुको समाज, संस्कृति र मन्दिर उन्नत थिए। तर पुरानो नियम साथै त्यसमा बढ़दै गएको भ्रष्टाचार र त्यस समय हुने मूर्ति पूजाको विवरण दिइएको छ। यस अवधिमा धेरै भविष्द्वक्ताहरुले इस्राएलिहरुलाई चेतावनी दिए कि यदि उनीहरुले मन परिवर्तन गरेनन भने, तब उनीहरुमाथि मोशाको श्राप आइपर्छ। यी चेतावनिहरुलाई अनदेखा गरे। यस समयको मध्यमा इस्राइली दुई पृथक राज्यहरु: इस्राएल र एप्रैमको उत्तरी राज्य र यहूदाको दक्षिण राज्यमा विभाजित भयो (जस्तै आजको समय कोरिया छ, एउटै मानिस दुई देशमा विभाजित भएका थिए – उत्तरी र दक्षिण कोरिया)।
यहूदिहरुको पहिलो निर्वासन: अश्शूर र बेबीलोन
अन्तमा, दुई चरणहरुमा श्राप उनीहरु माथि आई पर्यो। अश्शूरले एप्रैमको उत्तरी राज्यलाई 722 ईशा पूर्वमा नष्ट दियो र यसमा बस्ने इस्राएलिहरुलाई ठुलो मात्रामा आफ्नो विस्तृत साम्रज्यमा पठाई दिए। मिजोरमको बेन मनश्शे र आन्ध्रा प्रदेशको बेन एप्रैम यी निर्वासित गरिएको इस्राएलिहरुको वंशज् हुन्। तब 586 ईशा पूर्वमा नबूकदनेसर, बेबीलोनको एउटा शाक्तिशाली राजा आए – ठीक त्यसै गरि जसरी मोशाले 900 वर्ष पहिले भविष्यद्वाणी गरेका थिए, जब उनले आफ्नो यी श्रापहरु लाई लेखेका थिए:
49 “परमप्रभुले तिमीहरूसित लडाँईं गर्न टाढाबाट एउटा जातिका मानिसहरू ल्याउनुहुनेछन् तिनीहरू आकाशबाट गरूडले झम्टे जस्तै आउने छन्। तिमीहरूले तिनीहरूको भाषा बुझ्ने छैनौ। 50 तिनीहरू निष्ठुर हुनेछन्, बूढापाकाको आदर गर्दैनन् अनि स-साना नानीहरूप्रति दया देखाउँदैनन्। 51 तिनीहरूले तिमीहरूका पशुहरू र बाली लानेछन्। तिमीहरूको नाश नहुन्जेलसम्म तिनीहरूले प्रत्येक चीज लाने छन्। तिनीहरूले तिमीहरूका लागि अन्न, मद्य, तेल, गाईहरू, भेंडाहरू अथवा बाख्राहरू छोड्ने छैनन्। तिनीहरूले तिमीलाई नष्ट नगरे सम्म प्रत्येक चीज लाने छन्।
52 “तिमीहरू सोच्छौ त्यस शहरहरूको वरिपरि अग्ला-अग्ला र शक्तिशाली पर्खालहरूले तिमीहरूलाई सुरक्षा दिन्छन्। तर ती पर्खालहरू ढल्नेछन्। त्यस राष्ट्रका मानिसहरूले सबै शहरहरू घेरेर तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनु भएको भूमिमा एउटै शहर पनि बाँकी नराखी शत्रुहरूले आक्रमण गर्नेछन्। (व्यवस्था 28:49-52)
नबूकदनेसरले यरूशलेमलाई जिते, यसलाई जलाए र त्यसको मन्दिरलाई नष्ट गरे जसलाई सोलोमनले निर्मित गरेका थिए। उनले तब इस्राएलिहरुलाई बेबीलोनमा बन्धि बनाए। यसले मोशाको यस भविष्यद्वाणीलाई पूरा गरे कि:
63 “तिमीहरू प्रति राम्रो हुनका लागि र तिमीहरूको राष्ट्रको विकास गराउन परमप्रभु जति खुशी हुनु हुन्थ्यो तिमीहरूलाई नष्ट र ध्वंश पार्नु पनि त्यति नै खुशी हुनु हुनेछ। त्यो भूमि तिमीहरूले आफ्नै बनाउन जाँदैछौ तर मानिसहरूले तिमीहरूलाई भूमिबाट लखेट्नेछन्। 64 पृथ्वीका सबै मानिसहरू माझ परमप्रभुले तिमीहरूलाई छरपष्ट पारिदिनु हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई पृथ्वीको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म अन्य राष्ट्रका मानिसहरूमाझ छरपष्ट पारिदिनु हुनेछ। अनि त्यहाँ तिमीहरू काठ तथा ढुङ्गाले बनिएका झूटा पुर्खाहरूका थाहा नपाइएका देवताहरू पूज्ने छौ। (व्यवस्था 28:63-64)
विजयी र बाबुललाई निर्वासित
केरलको कोचीनको यहूदी दास्वतमा बस्नेहरु यी इस्राएलिहरुको वंशज् हुन्। किनकि 70 वर्ष देखि, यस अवधिलाई रातो रंगले देखाएको छ, यी इस्राएलिहरु (वा यहूदी जसलाई अहिलेको समयमा भनिन्छ) निर्वासनमा अब्राहाम र उनको वंशज्लाई प्रतिज्ञा गरेको भूमि बाट टाढा रहन्थे।
यहूदीहरूको भारतीय समाजमा योगदान
हामी यो लेखबाट प्रश्न लिन्छौं जुन भारतमा देखा पर्‍यो। हिन्दी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम र तमिल साथै पुरातन संस्कृत जसमा ऋग्बेद र अरु प्राचीन लेख सहित भारतका आधुनिक भाषाहरू ब्राह्मी लिपिको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ किनकि ती सबै पुरानो लिपिबाट आउँछन्। ब्राह्मी लिपिको रूपमा चिनिन्छ। आज ब्राह्मी लिपि अशोक सम्राट कालका केही पुराना स्मारकहरूमा मात्र देखिएको छ।
यद्यपि यो आधुनिक लिपिमा कसरी ब्राह्मी लिपि परिवर्तन भयो भन्ने बुझिएको छ, तर के कुरा स्पष्ट छैन भने भारतले कसरी पहिलो पटक ब्राह्मी लिपिलाई अपनायो। विद्वानहरूले टिप्पणी गरे कि ब्राह्मी लिपि हिब्रू−भाषाको लिपिसँग सम्बन्धित छ , जुन लिपि इस्राएलका यहूदीहरूले निर्वासनको समयमा र भारतमा बसाइँ सर्ने बेलामा प्रयोग भएको थियो। इतिहासकार डा. अविग्दोर शचन (१) प्रस्ताव गर्छन् कि निर्वासित इस्राएलीहरू जो भारतमा बसोबास गरिरहेका थिए उनीहरूले हिब्रू-भाषालाई आफूसँगै ल्याए − जुन ब्राह्मी लिपि बन्यो । यसले कसरी ब्राह्मी लिपिले यसको नाम पायो भन्ने रहस्यलाई पनि समाधान गर्दछ। के यो संयोग मात्र हो कि ब्रह्मी लिपि उत्तर भारतमा उही समयमा देखा पर्दछ जब यहूदीहरू त्यहाँ आफ्नो पुर्खाहरूको भूमि, अब्राहमको भूमिबाट निर्वासनमा बसेका थिए ? मूल निवासीहरू जसले अब्राहमको सन्तानको लिपि अपनाउँथे यसलाई (ए) ब्राह्मण लिपि भने। अब्राहमको धर्म एउटा परमेश्वरमा विश्वास थियो जसको भूमिका सीमित छैन। उहाँ पहिलो, अन्तिम र अनन्त हुनुहुन्छ। सम्भवतः यहींबाट ब्राह्मणमा पनि विश्वास शुरु भएको थियो, (ए) ब्रह्मको मान्छेको धर्मबाट । यहूदीहरूले , आफ्नो लिपि र धर्मलाई भारतमा ल्याउँदा , उनको विचार र इतिहासलाई मौलिक आधारमा धेरै आक्रमणकारीहरू भन्दा बढी प्राप्त गरे जसले उनको विजय हासिल गर्न र शासन गर्न खोजिरहेका थिए। र हिब्रू वेदहरू, जुन मूल रूपमा हिब्रू-भाषा − ब्राह्मी लिपिमा छ, आउँदै गरेको एक को मूल विषय हो, जुन आउँदै गरेको पुरुषा को संस्कृत ऋग्वेदको विषयसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर हामी मध्यपूर्वमा रहेका यहूदीहरूको पुर्खा भूमिबाट निर्वासन पछिको इतिहासमा फर्क्यौं। ।
फारसीहरुको अधीनतामा दास्वत देखि फर्किनु
यस पश्चात्, फारसी सम्राट कुस्रूले बेबोलोन जिते र कुस्रू संसारको सबसे भन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बने। उनले यहूदिहरुलाई उनीहरुको भूमिमा फर्किन अनुमति प्रदान गरे।
त्यस भूमिमा रहनु जुन फारसी साम्राज्यको भाग हो
तथापि उनीहरु अब एउटा स्वतंत्र देशमा थिएन्न, उनीहरु अब फारसी साम्राज्यको एउटा प्रान्तको रूपमा थिए। यो स्थिति लगभग 200 वर्ष सम्म रह्यो र यस समय रेखालाई गुलाबी रंगले दर्शाएको छ। यस समयमा यहूदिहरुको मन्दिर (जसलाई 2रे मन्दिरको रूपमा चिनिन्छ) र यरूशलेमको मन्दिरलाई पुर्न निर्मित गरे। यद्यपि यहूदिहरुलाई इस्राएलमा फर्किने अनुमित प्रदान गरिएको थियो, तथापि, उनीहरु मध्य धेरै जाना दास्वतमा नै रहे।
एलेक्जेन्डर (सिकन्दर) महान्ले फारसी साम्राज्यलाई जिते र इस्राएललाई आउनेवाला समय लगभग 200 वर्षको लागि ग्रीक साम्राज्यको एउटा प्रान्त बनाए। यसलाई गहिरो निलो रंगले देखाएका छ।
त्यस भूमिमा रहनु जुन ग्रीक भाग हो
यस पश्चात् रोमिहरुले ग्रीक साम्राज्यलाई पराजित गरे र उनीहरु प्रमुख विश्व शक्ति बने। यस साम्राज्यमा यहूदी एक पटक फेरी एउटा प्रान्त बने र यसलाई पहेंलो रंगले देखाएका छ। यो त्यो समय थियो जब येशू यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो। यसले यो विवरण दिन्छ, कि किन सुसमाचारहरुमा रोमी सैनिकमा पाइन्छ – किनकि रोमिहरुद्वारा इस्राएलिहरुको भूमिमा बसोबास गर्ने यहूदिहरु माथि येशूको समयमा शासन गरिएको थियो।
त्यस भूमिमा रहनु जुन रोमी साम्राज्यको भाग हो
रोमिहरुको अधीनतामा यहूदिहरुको दोस्रो पटक निर्वासित हुनु
बेबीलोनिहरुको समय देखि (586 ईशा पूर्व) यहूदी कहिल्यै पनि स्वतंत्र रहेनन् जसरी उनीहरु राजा दाऊदको अधीनतामा थिए। उनीहरु एक देखि अर्को साम्राज्यको अधीनमा शासित भए, ठीक त्यस्तै नै गरि जसरी भारत माथि बिट्रेनको शासन थियो। यहूदिहरूलाई यस प्रति नराम्रो लग्यो र उनीहरुले रोमी शासनको विरूद्ध विद्रोह गरे। रोमी आए र उनीहरुले यरूशेलमलाई (70 ईशा सन्)मा नष्ट गरि दिए, यसको 2रे मन्दिरलाई जलाई दिए र यहूदिहरुलाई रोमी साम्राज्यमा दोस्रो रूपमा निर्वासित गरे। यो यहूदिहरु दोस्रो पटक दास्वतमा गएका थिए। किनकि रोम निकै ठूलो थियो, परिणामस्वरूप यहूदी अन्तमा पूरै संसारमा फैलिए।
70 ईस्वीमा रोमीहरूद्वारा यरूशलेम र यरूशलेम नष्ट भयो। यहूदीहरू विश्वभरको निर्वासनमा पठाए
र यस प्रकारले यहूदी मानिस अतीतको लगभग 2000 वर्ष रहे: विदेशी भूमिमा छरिएको र उनीहरुलाई कहिल्यै पनि कुनै भूमिमा स्वीकार गरेनन। यी विभिन्न देशहरुमा उनीहरुले निरन्तर रुपमा ठूलो सतावहरुले दु:ख उठाए। यहूदिहरुको माथि आएको सताव यूरोपको संदर्भमा विशेष रूपले सत्य हो। पश्चिमी यूरोपमा, स्पेन देखि लिएर रूस सम्म यहूदिहरुलाई यी देशहरुमा अक्सर खतरनाक परिस्थितिहरुमा बस्न पर्यो।यी सतावहरु देखि बचनको लागि यहूदी निरन्तर कोचीनमा पुगे। 17वीं व 18वीं शताव्दीमा भारतको अन्य भागहरुमध्य पूर्वी देशहरु बाट यहूदिहरुको आगमन भयो र उनीहरुलाई बगदादी यहूदी को रूपमा चिनिन्छन, जुन मुख्य रूपमा मुम्बई, दिल्ली र कोलकातामा बसेका थिए। 1500 ईशा पूर्व मोशाद्वारा दिइएको श्राप उनीहरुको विवरण अनुरूप हो, कि कसरी उनीहरुले जीवन यापन गरेका थिए।
1 डेविड सासोन र उनको पुत्र – भारतमा रहेका धनी बगदादी यहूदी
65 “ती राष्ट्रहरूका माझ तिमीहरूले शान्ति पाउने छैनौ र विश्रामको निम्ति तिमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। परमप्रभुले तिमीहरूको मनमा चिन्ता भरी दिनु हुनेछ। तिमीहरूका आँखा थाकेका हुनेछन्। तिमीहरू दुःखी हुनेछौ। (व्यवस्था 28:65)
इस्राएलिहरुको विरूद्ध दिएको श्राप मानिसहरुलाई यो सोध्नको लागि दिएको थियो:
24 “तब अरू सबै राष्ट्रका मानिसहरूले सोध्नेछन्, ‘परमप्रभुले यो भूमिलाई यस्तो पार्नुभयो? उहाँ किन यति विघ्न रिसाउनु भयो?’ (व्यवस्था 29:24)
र यसको उत्तर यो थियो:
25 उत्तर यस्तो हुनेछ, ‘कारण इस्राएलका मानिसहरूले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट ल्याउँदा परमप्रभु तिनीहरूको पिता-पुर्खाहरूको परमेश्वरसित गरिएको करारलाई त्याग गरे। 26 तिनीहरू आफूले नचिनेको र परमप्रभुले नबताएको अन्य जातिको देवताहरूको सेवा तथा पूजा गर्न लागे। 27 अनि परमप्रभुको क्रोधले यस भूमिका प्रत्येक मानिसहरूमाथि नराम्रा कुरा ल्याए त्यो शिक्षाहरूको पुस्तकमा लेखिएका छन्। 28 परमप्रभु अत्यन्तै असन्तुष्ट हुनु भएकोले त्यस भूमिबाट बाहिर निकालेर अहिले तिनीहरूले बसो-बास गरेको भूमिमा राख्नु भयो।’ (व्यवस्था 29:25-28)
तल दिइएको समय रेखाले यस 1900 वर्षको अवधिलाई दर्शाउछ। यस अवधिलाई रातो रंगको मोटो रेखाले दर्शाएको छ।
दासत्वको दुई शताब्दीलाई चित्रित गर्दै – यहूदीहरुको ऐतिहासिक समय रेखा
तपाईंले हेर्न सक्नु हुन्छ, कि उनीहरुको इतिहासमा यहूदीहरु दास्वतको दुई अवधिहरु बाट भएर गए तर दोस्रो दास्वत पहिलो दास्वत देखि धेरै लामो समय सम्म थियो।
20औं शताब्दीको आहुति
यहूदिहरुको विरूद्ध सताव आफ्नो चरम सीमामा तब पुग्यो जब हिटलरले, नाजी जर्मनी द्वारा, यूरोपमा रहेका सबै यहूदिहरुलाई पूर्ण रीतिले नष्ट गर्ने प्रयास गरे। त्यो लगभग सफल पनि भयो तर उसको पराजय भयो र यहूदिहरुमध्य निकै काम बाकी रहे।
आधुनिक इस्राएलको पुन: – स्थापना
मात्र यस तथ्यले, कि यस्ता मानिस, जसले स्वयंलाई ‘यहूदिहरु’ को रूपमा परिचित गर्दै हजारौँ वर्ष पश्चात् पनि बिना कुनै जन्म भूमिको अस्तित्व मा छन्, यो आफैमा नै उल्लेखनीय थियो। तर यसले 3500 वर्ष पहिले मोशाद्वारा लेखेको वचनहरुलाई सत्य प्रमाणित गरि दियो। 1948 मा यहूदिहरुले, संयुक्त राष्ट्रद्वारा इस्राएललाई आधुनिक देशको रूपमा पुन: स्थापित हुदै गरेको हेर्न आफैमा नै उल्लेखनीय थियो, ठीक त्यसै गरि जसरी मोशाले धेरै वर्ष पहिले लेखे थिए:
3 तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरू प्रति दयालु हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई मुक्त गराई तिमीहरूलाई छरपष्ट पारेर पठाइएका देशहरूबाट फर्काई ल्याउनु हुनेछ।4यदि तिमीहरूलाई अत्यन्तै टाढा देशहरूमा पठाइएको भए पनि बटुलेर ल्याउनुहुनेछ।5जुन भूमि तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूको थियो त्यो फेरि तिमीहरूकै हुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूको निम्ति असल हुनुहुनेछ र तिमीहरूको पिता-पुर्खाहरूसँग भएको भन्दा धेरै परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिनु हुनेछ। अरू जातिमाभन्दा तिमीहरूको जन संख्या धेरै हुनेछ। (व्यवस्था 30:3-5)
धेरै विरोध पश्चात् पनि यस देशको स्थापना हुनु स्वयंमा नै उल्लेखनीय हो। यसको चारै तिरको अधिकांश देशहरुले इस्राएलको विरूद्ध 1948 विरूद्ध… यस पश्चात् 1956 मा… यसको पश्चात् 1967 मा एक पटक फेरी 1973मा युद्धको शुरु गरेका थिए। इस्राएल एक निकै नै सानो देश हो,जसले धेरै पटक एक समयमा पाँचवटा देशहरुको साथमा युद्ध गरि रहेको हुन्थ्यो। यस्तो हुदा पनि, इस्राएल न केवल जोगियो, अपितु यसको क्षेत्रफल पनि बढ़दै गयो। 1967 को युद्धमा इस्राएलले यरूशलेमलाई प्राप्त गर्यो, जुन दाऊद द्वारा लगभग 3000 वर्ष पहिले स्थापित गरेको ऐतिहासिक राजधानी थियो। इस्राएलको देशको स्थापना, र यी युद्धहरुको परिणामहरुले आजको हाम्रो संसारमा सब भन्दा कठिन राजनैतिक समस्याहरुलाई जन्म दियो।
जस्तै कि मोशा द्वारा भविष्द्वाणी गरिएको थियो र जसलाई यहाँ निर विस्तार सहित देख्न सकिन्छ, इस्राएलको पुन: स्थापना इस्राएल को तर्फ फर्किन को लागि भारतमा बसेका विभिन्न यहूदिहरुको लागि एउटा प्रोत्साहन उत्पन्ना गर्दछ। यस समय इस्राएलमा 80,000 यस्ता यहूदी बस्छन, जसमध्य एउटा अभिभावक भारतदेखि र भारतमा अब केवल 5000 यहूदी मात्र बाकी रहेका छन्। जहाँ सम्म मोशाको आशीषहरुको संदर्भ छ, उनलाई निकै नै “टाढाको देशहरु” बाट जम्मा गरिएको हो (जस्तै कि मिजोरम) र उनीहरुलाई “फिर्ता” गराउदै छन्। यसको निहितार्थ यहूदिहरु र गैर-यहूदिहरु दुवै को एक अर्कामा तुलना यहाँ निर प्रकाश परिएको छ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 13/10/2017 22/07/2020 श्रेणिया सामान्य प्रश्नहरू (FAQs)टैग्स आशीर्वाद र बाली, आशीर्वाद र मस्जिदहरूको शापमा शापहरू, जोसलाई श्राप दिन्छ, यहूदीहरूलाई आशिष् दिन्छन्
जब हामी आशीर्वाद र भाग्यको बारेमा सोच्छौं तब हाम्रो दिमाग लक्ष्मी, भाग्य, सफलता र धनको देवीमा जान्छ। लोभमा काम गरेको छैन भने उनले कडा मेहनतमा आशीर्वाद दिन्छिन । दूधिया महासागरको मंथनको कथामा, इन्द्रले पवित्र फूलहरू फ्याँक्दा देखाएको अनादरको कारण लक्ष्मीले देवहरू छोडे र दूधिया महासागरमा प्रवेश गरिन । यद्यपि, एक हजार वर्ष पछि उनको फिर्तीको लागि सागर मंथन गरिसके पछि, उनले सच्चा भक्तहरूलाई उनको नयाँ जन्मका साथ आशीर्वाद दिइन ।
जब हामी विनाश, उजाड र नष्ट गर्ने बारेको विचार गर्छौं तब हाम्रो दिमागमा भैरव, शिवको भव्य अवतार वा शिवको तेस्रो आँखामा जान्छ। यो प्रायः बन्द हुन्छ तर दुष्टकर्मीहरूलाई नष्ट गर्न उनले यसलाई खोल्दछन । लक्ष्मी र शिव दुवैले भक्तहरूले धेरै ध्यान खिचेकाछन । किनभने व्यक्तिहरूले एकबाट आशिषको चाहना गर्दछन् र अर्कोको श्राप वा विनाशदेखि डराउँछन्।
आशिष् र श्रापहरू ….. इस्राएलीहरूलाई ….. हामीलाई निर्देशन दिनका लागि।
हिब्रु वेदमा देखाइएको सृष्टिकर्ता प्रमेश्वोर लक्ष्मी जस्तै आशिर्बाद दिनलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने र भैरव वा शिवको तेस्रो नेत्र जत्तिकै भयानक (डरलाग्दो ) श्राप र विनाश गर्ने दुबैको रचना गर्ने थिए। यो आफ्ना चुनिएका मानिसहरू −इस्रायलीहरु − लाई निर्देशित गरियो जो उहाँका भक्तहरु थिए। ती निर्देशनहरु परमेश्वरले इस्रायलीहरुलाई मिश्रको दासत्वबाट बाहिर निकाले पछि उनीहरूलाई दश आज्ञा दिनु भएको थियो − पापले उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको मानक थियो । ती आशिष् र श्रापहरू इस्रायलीहरूलाई निर्देशित गरिएको थियो तर धेरै अघि घोषणा गरिएको थियो ताकि अरू सबै राष्ट्रहरूले ध्यान दिओस र महसुस गरोस कि इस्रायलीहरूलाई प्रदान गरेको उही शक्तिले उहाँ हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। हामी सबै जो समृद्धि र आशीर्वाद चाहान्छौ र विनाश र श्रापबाट जोगिन चाहान्छौ उनीहरूले इस्राएलका अनुभवबाट पाठ सिक्न सक्छौं ।
मोशा लगभग 3500 वर्षा रहे र उनले बाइबलको पहिलो पाँच पुस्तकहरु लेखे – पंचग्रन्थ वा तोराह। पाँचौ पुस्तक, व्यवस्था, मा उहाँको मृत्यु भन्दा ठीक पहिले उहाँद्वारा बोलेका अन्तिम वचनहरु पाइन्दछ। यी वचनहरु इस्राएलका मानिसहरु – यहूदिहरुको लागि उहाँको आशीषहरु थिए, तर साथै यसमा श्राप पनि थियो। मोशाले लेखे कि यी आशीषहरु र श्राप ले संसारको इतिहासलाई आकार प्रदान गर्ने छ र यसमा न केवल यहूदिहरु मात्र, तर अन्य अरु जातिहरुद्वारा पनि ध्यान दिन परेन्छ। यी आशीष र श्रापहरु ले भारतको इतिहासलाई पनि प्रभावित परेका छ। त्यसैले यसको लेखन हाम्रो आत्म चिन्तनको लागि हो। आशीष र श्रापहरुको पूरा सूची यहाँ निर दिइएको छ। यसको सार तल दिइएको छ।
मोशाले त्यी आशीषहरुलाई वर्णन गर्न आरम्भ गरे जसलाई इस्राएलको मानिसले तब प्राप्त गरे जब उनीहरुले व्यवस्थाको पालन गरे, जस मध्य दस आज्ञाहरु पनि सम्मिलित छन्। परमेश्वरको तर्फ बाट आउने आशीष यति ठुलो हुनेछ कि अन्य जातिहरुले पनि त्यो आशीषहरुलाई चिन्नेछन्। यी आशीषहरुको परिणाम निम्न लिखित हुनेछ:
10 तब पृथ्वीका सबै मानिसहरूले थाहा पाउनेछन् तिमीहरू परमप्रभुका मानिसहरू हौ र तिनीहरू तिमीहरूसित डराउने छन्। (व्यवस्था 28:10)
… र श्राप
तर, यदि इस्राएलीले आज्ञाहरुलाई पालन गर्नमा असफल भएमा, तब उनीहरुले श्रापहरुलाई प्राप्त गर्नेछन् जुन आशीषहरुको स्थानमा हुनेछ र उनीहरुको तुलना अनुरूप हुनेछ। यी आशीषहरुलाई पनि चारै तर्फको जातिहरुद्वारा दखिने छ:
37 देशहरू जहाँ परमप्रभुले तिमीहरूलाई पठाउनुहुनेछ त्यहाँ मानिसहरू तिमीहरूमाथि भएको कष्ट देखेर दुःखी हुनेछन् अनि तिनीहरू तिमीहरूमाथि हाँस्नेछन् र अपमान गर्नेछन्। (व्यवस्था 28:37)
र यो श्राप आउने इतिहास सम्म विस्तारित हुने छ।
46 अनि तिनीहरू सघैं तिमीहरू अनि तिमीहरूका सन्तान अघि इर्श्वरको न्यायको प्रतीकको रूपमा रहने छन्। (व्यवस्था 28:46)
तर परमेश्वरले चेतावनी दिनुभयो यी श्रापहरुको सबैभन्दा नराम्रो अंश अन्य जातिहरुको तर्फ बाट आउने छ।
49 “परमप्रभुले तिमीहरूसित लडाँईं गर्न टाढाबाट एउटा जातिका मानिसहरू ल्याउनुहुनेछन् तिनीहरू आकाशबाट गरूडले झम्टे जस्तै आउने छन्। तिमीहरूले तिनीहरूको भाषा बुझ्ने छैनौ। 50 तिनीहरू निष्ठुर हुनेछन्, बूढापाकाको आदर गर्दैनन् अनि स-साना नानीहरूप्रति दया देखाउँदैनन्। 51 तिनीहरूले तिमीहरूका पशुहरू र बाली लानेछन्। तिमीहरूको नाश नहुन्जेलसम्म तिनीहरूले प्रत्येक चीज लाने छन्। तिनीहरूले तिमीहरूका लागि अन्न, मद्य, तेल, गाईहरू, भेंडाहरू अथवा बाख्राहरू छोड्ने छैनन्। तिनीहरूले तिमीलाई नष्ट नगरे सम्म प्रत्येक चीज लाने छन्। 52 “तिमीहरू सोच्छौ त्यस शहरहरूको वरिपरि अग्ला-अग्ला र शक्तिशाली पर्खालहरूले तिमीहरूलाई सुरक्षा दिन्छन्। तर ती पर्खालहरू ढल्नेछन्। त्यस राष्ट्रका मानिसहरूले सबै शहरहरू घेरेर तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनु भएको भूमिमा एउटै शहर पनि बाँकी नराखी शत्रुहरूले आक्रमण गर्नेछन्। (व्यवस्था 28:49-52)
यो नराम्रो बाट अत्याधिक खराब हुने छ।
63 “तिमीहरू प्रति राम्रो हुनका लागि र तिमीहरूको राष्ट्रको विकास गराउन परमप्रभु जति खुशी हुनु हुन्थ्यो तिमीहरूलाई नष्ट र ध्वंश पार्नु पनि त्यति नै खुशी हुनु हुनेछ। त्यो भूमि तिमीहरूले आफ्नै बनाउन जाँदैछौ तर मानिसहरूले तिमीहरूलाई भूमिबाट लखेट्नेछन्। 64 पृथ्वीका सबै मानिसहरू माझ परमप्रभुले तिमीहरूलाई छरपष्ट पारिदिनु हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई पृथ्वीको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म अन्य राष्ट्रका मानिसहरूमाझ छरपष्ट पारिदिनु हुनेछ। अनि त्यहाँ तिमीहरू काठ तथा ढुङ्गाले बनिएका झूटा पुर्खाहरूका थाहा नपाइएका देवताहरू पूज्ने छौ। 65 “ती राष्ट्रहरूका माझ तिमीहरूले शान्ति पाउने छैनौ र विश्रामको निम्ति तिमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। परमप्रभुले तिमीहरूको मनमा चिन्ता भरी दिनु हुनेछ। तिमीहरूका आँखा थाकेका हुनेछन्। तिमीहरू दुःखी हुनेछौ। (व्यवस्था 28:63-65)
परमेश्वर र इस्राएलिहरुको मध्यमा औपचारिक सहमतिद्वारा यी आशीष र श्रापहरुलाई स्थापित गरिएको थियो।
12 आज तिमीहरू परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरसित एउटा करारमा बाँधिनु पर्छ र परमप्रभुले त्यो करार आज बनाउनु हुँदैछ। 13 यो प्रतिज्ञासँगै, परमप्रभुले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै विशेष मानिसहरू बनाउनु भयो, अनि त्यो प्रमाणित गर्नु भएको छ उहाँ तिमीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ जस्तो उहाँले तिमीहरू अनि तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरू अब्राहाम, इसहाक अनि याकूबलाई गर्नु भएको थियो। 14 परमप्रभुले तिमीहरूसित मात्र यो करार गर्नु तथा प्रतिज्ञा गर्नु हुनेछैन, 15 तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर सबैसँग यो करार गर्नु हुँदैछ जो उहाँको अघि उभिएका छन् अनि हाम्रा भावी सन्तानहरूसँग जो आज हामीसँग छैनन्। (व्यवस्था 29:12-15)
यस कारण यी वाचा सन्तान र भविष्यको पिढ़िहरु माथि निर्मित हुनेछ। सत्य यो हो कि, यो वाचा भविष्यको पीढ़िहरु- दुवै अर्थात् इस्राएलिहरु र परदेशिहरुको तर्फ निर्देशित गरिएको छ।
22 “भविष्यमा जब तिमीहरूका सन्तानहरू तथा टाढा-टाढाबाट आएका विदेशीहरूले देख्ने छन् कसरी भूमि नष्ट भयो। तिनीहरूले देख्ने छन् कसरी रोगहरू परमप्रभुले ल्याउनु भयो। 23 त्यहाँको भूमि सब गन्धकको आगोले जल्नेछ र नूनले ढाकिनेछ अनि त्यहाँ घाँससम्म उम्रने छैन। परमप्रभुको रीसले त्यो भूमि नष्ट हुनेछ जस्तो सदोम, गमोरा, अदमा र सबोयीम नष्ट गरिएका थिए। 24 “तब अरू सबै राष्ट्रका मानिसहरूले सोध्नेछन्, ‘परमप्रभुले यो भूमिलाई यस्तो पार्नुभयो? उहाँ किन यति विघ्न रिसाउनु भयो?’ (व्यवस्था 29:22-24)
र यसको उत्तर यो हुने छ:
के आशीष र श्रापहरु घटित हुन्छन?
यसको बारेमा केहि पनि तटस्थता छैन। आशीहरु हर्षालु थियो र श्राप डार लाग्दो थियो ,तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न जुन हामी सोध्ने सक्छौ, त्यो यो हो : ‘के यो घटित हुन्छ?’ पुरानो नियम को लिपिबद्ध वृतान्तको एउटा ठुलो भाग इस्राएलियहरुको इतिहास हो, यस प्रकारले हामीले उनीहरुले इतिहासलाई जान्दछौ। साथै हामीसंग पुरानो नियमदेखि बाहिरको ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्मारकहरुको लिपिबद्ध वृतान्त पाइन्छ। त्यी सबै इस्राएलिहरु वा यहूदिहरुको इतिहासको एउटा स्थाई चित्रलाई प्रस्तुत गर्दछ। यो यहाँ निर समय रेखाद्वारा दिएको छ। तपाई स्वयं आफैले पढ्नु होस् र मुल्यांकन गर्नुहोस कि के मोशाको श्राप पुरा भयो कि भएन। यसले साथै यो कुराको पनि उत्तर दिन्छ, कि किन यहूदी समूह 2700 वर्षौ पहिले देखि आरम्भ हुँदै भारतमा स्थानांतरित भएका थिए (उदाहरणको लागि मिजोरमको बेनी मनश्शे)। उनीहरु अश्शूरी र बेबीलोनको विजयी अभियानहरुको परिणामस्वरूप धेरै मात्रामा पुरै भारतमा छरीए – ठीक त्यसै गरी जसरी मोशाले चेतावनी दिएका थिए।
मोशा को आशीषहरु र श्रापहरुको निष्कर्ष
मोशाको अन्तिम वचन श्रापहरुको साथै अन्त हुदैन। यहाँ निर यस्तो दिएको छ, कि कसरी मोशाले आफ्नो अन्तिम घोषणाहरुलाई दिएका थिए।
“मैले तिमीहरूलाई बताएको आशीर्वाद र सरापहरू तिमीहरूमाथि पर्नेछन् अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई खेदी पठाउनु भएको भूमिमा ती कुराहरू सम्झना गर्नेछौ।2त्यस समय जब तिमीहरूका सन्तान र तिमीहरू परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ फर्केर आउनेछौ र आज मैले बताएका उहाँका सबै आज्ञाहरू हृदयबाट नै पालन गर्नेछौ।3तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरू प्रति दयालु हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई मुक्त गराई तिमीहरूलाई छरपष्ट पारेर पठाइएका देशहरूबाट फर्काई ल्याउनु हुनेछ।4यदि तिमीहरूलाई अत्यन्तै टाढा देशहरूमा पठाइएको भए पनि बटुलेर ल्याउनुहुनेछ।5जुन भूमि तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूको थियो त्यो फेरि तिमीहरूकै हुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूको निम्ति असल हुनुहुनेछ र तिमीहरूको पिता-पुर्खाहरूसँग भएको भन्दा धेरै परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिनु हुनेछ। अरू जातिमाभन्दा तिमीहरूको जन संख्या धेरै हुनेछ। (व्यवस्था 30:1-5)
हजारौ वर्ष सम्म निर्वासित रहनु पश्चात्, 1948 मा – जसमध्य आज पनि धेरै मानिस जीवित छन्, उनीहरुको जीवनकालमा नै – इस्राएलको आधुनिक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रको प्रस्तावद्वारा पुन: स्थापित गरियो र यहूदिहरु संसारको चारै तर्फ बाट यस ठाउमा फेरी फर्किन आरम्भ गरे – ठीक त्यसै गरी जसरी मोशाले भविष्यद्वाणी गरेका थिए। भारतमा आज, कोचीन, आन्ध्रा प्रदेश र मिजोरममा रहनेहरु हजारौँ वर्ष पुरानो यूहदी समाज तीव्रमात्रामा घटदै जादैछ, किनकि यहूदी आफ्नो पूर्वजहरुको भूमिमा फर्की जाँदै छन्। भारतमा केवल 5000 यहूदी मात्र बाँकी छन्। हाम्रो आँखा आगाडी नै मोशाको आशीषहरु पुरा हुँदै छ, निश्चित रूपमा श्रापहरुले उनको इतिहासलाई निर्मित गरेको थियो।
हाम्रो लागि यसमा धेरै सुचना पाइन्छ। प्रथम, आशीषहरु र श्रापहरुले आफ्नो अधिकार र सामर्थ्यलाई बाइबलको परमेश्वरदेखि प्राप्त गरेका थिए। मोशा मात्र एक आत्म जागृति व्यक्ति – एक ऋषि थिए। सत्य यो हो कि, यो आशीषहरु र श्राप हजारौ वर्ष सम्म आउदै, पूरा संसारको जातिहरुमा विस्तारित हुँदछ, र करोडौ मानिसहरुलाई प्रभावित गर्नु (यहूदिहरुको इस्राएलमा फेरी फर्किनाले उथल पुथल उत्पन्न गरिदियो – यो नियमित रूपले वैश्विक समाचार बनाउने घटनाहरुको कारण बनेको छन्)परमेश्वरसंग सामर्थ्य र अधिकार छ, जसको पुष्टि बाइबल (वेद पुस्तक) ले प्रमाण गर्छ। त्यही तोराहमा उहाँले यो प्रतिज्ञा पनि गर्नु भएको छ कि पृथ्वीको सबै मानिसहरुले आशीष पाउने छन्। ‘पृथ्वीको सबै मानिसहरुमध्य’ मा तपाई र म पनि सम्मिलित छौ। यस पश्चात् अब्राहमको पुत्रको बलिदान मा, परमेश्वर पुन पुष्टि गर्नुहुन्छ कि ‘सबै जातिहरुले आशीष पाउनेछ’। यस बलिदानको अद्भुत स्थान र वर्णनले हामीलाई यस कुरालाई जन्नमा सुराग दिदै सहायता प्रदान गर्दछ कि यस आशीषलाई कसरी प्राप्त गरिन्छ। आशीषलाई अब मिजोरम, आन्ध्रा प्रदेश र केरलदेखि फर्किने यहूदिहरुको माथि राखी दियो, जो एउटा यस्तो चिन्ह हो, कि परमेश्वर जसले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गरेको छन्, भारतको सबै राज्यहरु र यस संसारको अन्य सबी जातिहरुमा समान रूपले आशीषलाई दिन सक्नुहुन्छ र दिन चाहनुहुन्छ। यहूदिहरु जस्तै नै, हामी पनि हाम्रो श्रापको मध्यमा आशीषहरुलाई दिने प्रस्ताव राखेको छ। किन हामी यी आशीषको यस वरदानलाई प्राप्त नगर्ने त?
लेखक Ragnarप्रकाशित 06/10/2017 14/07/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स आशीर्वाद र बाली, आशीर्वाद र मस्जिदहरूको शापमा शापहरू, जोसलाई श्राप दिन्छ, यहूदीहरूलाई आशिष् दिन्छन्